इकाइधनीलाई उच्च प्रतिफल वितरण गर्नेछौं
२०७८ असार, १०
एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको तेस्रो बन्दमुखी योजना सञ्चालनका लागि असार १० गतेदेखि इकाइ बिक्री खुला गर्दै छ । एनआईसी एशिया सेलेक्ट ३० इन्डेक्स फण्डको इकाइ बिक्री खुला गर्न लागेको हो । ७ वर्षे अवधिको प्रतिइकाइ मूल्य रु. १० अंकित दरको १० करोड इकाइमध्ये ८ करोड ५० लाख इकाइ सर्वसाधारण तथा संघ–संस्थाहरूले खरिद गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक निष्कासनमा आउन लागेको छ । उक्त योजनामा लगानी गर्दा इकाइधनीले कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषयमा आर्थिक अभियानकर्मी प्रजिता बुढाथोकीले एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेन्द्र रायमाझीसँग गरेको कुराकानी :
एनआईसी एशिया क्यापिटलले बिक्रीमा ल्याउन लागेको एनआईसी एशिया सेलेक्ट ३० इन्डेक्स फण्डको प्रमुख विशेषता के हो ?
यो इन्डेक्स फण्ड हो । यस योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ । योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्दा तीमध्ये राम्रा मानिएका ३० वटा मात्र उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गरी लगानी गरिने हो । सोहीअनुसार कम्पनी छनोट गर्दा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३० वटा उत्कृष्ट कम्पनी छानेर लगानी गरिन्छ । ३० वटा कम्पनीमा गरिएको लगानीले समग्र स्टक एक्सचेञ्जमा कायम गरेको सम्पूर्ण समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस फण्डलाई इन्डेक्स फण्ड भनिएको हो ।
क्यापिटलले यसअघि नै म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेको छ । ती फण्डभन्दा यो फण्ड कसरी फरक छ ?
यो योजना सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुई वटा बन्दमुखी योजना एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र एनआई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड तथा एउटा खुलामुखी योजना एनआईसी एशिया डायनामिक डेप्थ फण्ड सञ्चालन गरिरहेका छौं । ती योजना अहिले सञ्चालन गर्न लागिएको योजनाभन्दा फरक छन् । अहिले सञ्चालन गर्न लागिएको योजना नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रकृतिको फण्ड हो । यस योजनाले समग्र शेयर बजार परिसूचकलाई रिफ्लेक्सन गर्नेछ । उक्त योजनाको अधिकांश रकम निश्चित आय हुने उपकरणमा लगानी गरिन्छ ।
क्यापिटलले सञ्चालन गर्ने म्युचुअल फण्ड थपिरहँदा यसको व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुहुन्छ ?
हामीले योसहित ४ वटा म्युचुअल फण्ड योजना सञ्चालन गर्नेछौं । यसमध्ये ३ वटा बन्दमुखी र एउटा खुलामुखी योजना रहनेछन् । दक्ष लगानी व्यवस्थापन तथा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट’ व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रत्येक योजनाको पोर्टफोलियो निर्माणको जिम्मेवारीमा छुट्टाछुट्टै योजना अधिकृत तोकेका छौं । यसले अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन र प्राविधिक विश्लेषण प्रतिवेदनको आधारमा बजारको अवस्था हेरेर लगानीसम्बन्धी निर्णय गरिनेछ ।
छुट्टाछुट्टै योजनाको व्यवस्थापन सुरुआतदेखि नै छुट्टाछुट्टै कर्मचारीलार्ई जिम्मेवारी दिई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एउटा फण्डमा कारोबार गर्दा अर्को फण्ड व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी मिलाइएको छ । प्रत्येक योजनाको हरेक काम–कारबाहीको विवरण मासिक रूपमा कोष सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गरिने हुँदा क्यापिटलबाट सञ्चालित योजनाबीच द्वन्द्व नहुने गरी कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
यो फण्डबाट वार्षिक प्रतिफलको सम्भावनालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
एनआईसी एशिया सेलेक्ट ३० फण्डमा लगानी गर्ने इकाइधनीले योजना सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षदेखि नै नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । हामीले पहिलो वर्षमै कम्तीमा १० प्रतिशत तथा दोस्रो वर्षदेखि कम्तीमा १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । समग्रमा यस योजनामा लगानी गर्ने इकाइधनीले कम्तीमा १४३ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
म्युचुअल फण्डले विशेषगरी धितोपत्र बजारमा लगानी गरी नाफा कमाउने हो । अहिलेको बजारमा लगानी सुरक्षा कसरी हुन्छ ?
म्युचुअल फण्डको प्रमुख विशेषता भनेकै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गरी नाफा आर्जन गरेर इकाइधनीलाई उचित प्रतिफल वितरण गर्ने हो । अहिले नेप्से परिसूचक बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । बजार उच्च बिन्दुतर्फ जाँदै गर्दा बजारमा सुझबुझका साथ लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्दछ । त्यसैले अहिलेको समय दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने निर्णय लिँदा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा सूचीकृत कम्पनीको मूल्यलाई प्रभाव पर्ने सम्पूर्ण कुराको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र लिनुपर्छ । यो विषय सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि गाह्रो पनि हुन सक्छ । तर, म्युचुअल फण्ड सञ्चालकसँग बजारको राम्रो ज्ञान, अनुभवी विज्ञ समूह हुने र लगानी गर्नुअघि कम्पनीहरूको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने हुँदा म्युचुअल फण्डमार्फत गरिएको लगानी बढी सुरक्षित हुने देखिन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि म्युचुअल फण्डको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
म्युचुअल फण्डको आयमा कर नलाग्ने कुरा पहिल्यै उल्लेख भए पनि अस्पष्ट थियो, जुन अहिलेको बजेटले प्रस्ट्याएको छ । म्युचुअल फण्डको आम्दानीमा कर नलाग्ने हुँदा मुनाफा वृद्धि निश्चित भएको छ । यसले गर्दा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न आमलगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ । म्युचुअल फण्डको विकास र विस्तारका लागि यसको इकाइमा गरिएको लगानीमा आय कर छुट, यससम्बन्धी तालिम तथा शैक्षिक संस्थाको स्थापना, खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण, म्युचुअल फण्डमार्फत विदेशी लगानी खुला गर्नेजस्ता नयाँ व्यवस्था गर्न सकिए म्युचुअल फण्ड पनि लगानीको प्रमुख औजारको रूपमा धितोपत्र बजारमा परिचित हुन सक्नेछ ।
म्युचुअल फण्डको इकाइबारे अझै पनि धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयर भनेर आवेदन दिएको पाइन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको इतिहास कम भएको तथा यसमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने लाभबारे जानकारी गराउन नसकिएकाले यसप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ कम भएको हुन सक्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि उक्त क्षेत्रबारे राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले निष्कासन गरेको म्युचुअल फण्डमा पनि लगानी गर्दा आमसर्वसाधारणले निष्कासनका लागि तयार गरिएको विवरण–पत्र राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गर्दछु ।
यो फण्डमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार के प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?
यो योजनाको अधिकांश रकम ३० वटा उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गरेर लगानी गरिन्छ । लगानी गर्ने कम्पनी छनोट गर्दा विगतमा कम्पनीले गरेको पफर्मेन्स तथा भविष्यमा गर्न सक्ने ग्रोथ आदि हेरेर कम्पनीको सूची तयार पारिन्छ । उक्त सूचीमा परेकामध्ये पनि ३० वटा सर्वाेत्त्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्दा मार्केट क्यापिटलाइजेसन, नेप्से इन्डेक्ससँगको कोरिलेसन र अन्य प्यारामिटरका साथै लगानी गरिने कम्पनीले भविष्यमा वितरण गर्न सक्ने लाभांश दर तथा ग्रोथलगायत अन्य अवस्था हेरेर मात्र लगानी गरिन्छ । यसले फण्डमार्फत गरिएको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । विशेषगरी दोस्रो बजारमा हुने ‘अनसिस्टमेटिक रिस्क’ कम गर्न लगानी विविधीकरणको रणनीतिमार्फत व्यवस्थापन गर्दै छौं । त्यसैले यो फण्डमा लगानीकर्ताको लगानी न्यून जोखिम हुनुका साथै सुरक्षित र उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एनआईसी एशिया क्यापिटलबाट आगामी दिनमा थप के–कस्ता सेवा प्रदान गर्ने योजना छ ?
एनआईसी एशिया क्यापिटलले म्युचुअल फण्डका साथै शेयर रजिस्ट्रार, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, शेयर प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, निक्षेप सदस्य, संस्थागत परामर्शलगायत मर्चेन्ट बैंकिङ तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको समय क्यापिटलबाट सेवा लिने ग्राहकको सहजताका लागि अधिकांश सेवा अनलाइन तथा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइरहेका छौं । आगामी दिनमा सेवालाई डिजिटलाइज गर्दै लैजाने रणनीति लिएका छौं । हामीले एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको पाँचाैं योजना एनआईसी एसिया फ्लेक्सी ऋयाप फण्ड नामक बन्दमुखी योजना स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पेस गरिसकेका छौं ।
कोभिडका बेला घरायसी प्रयोजनका सामग्रीको माग बढेको छ[२०७८ सावन, १५]
वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु[२०७८ सावन, १३]
निगमलाई कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो[२०७८ सावन, ६]
बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ[२०७८ असार, ३०]
इकाइधनीलाई उच्च प्रतिफल वितरण गर्नेछौं[२०७८ असार, १०]